Iphrofayili yenkampani - i-Dongfang Whole-set Equipment Equipment Group Co, Ltd.
Jiangsu Dongfang Isisekelo Sesethi Yezinto Ezikhiqizwayo Group Co, Ltd.
Isungulwe ngonyaka we-2000 kanye nenhloko-dolobha ebhalisiwe ye-yuan yezigidi eziyi-118, i-Jiangsu Dongfang Whole-set Equipment Manufacturing Co, Ltd. itholakala eJingjiang, idolobha elisendaweni yokuthuthukisa ezomnotho eYangtze River, eholwa indawo yokuthuthukisa ezomnotho eShanghai. Sinezisebenzi ezingama-548, futhi sikhethekile ekwenziweni nasekufakweni kwamabhokisi washubhu kanye nezesekeli zomlilo zomkhakha wezolimo. Imikhiqizo yethu ifaka ifaneli yokuguqulwa yokukhiqizwa kwe-hydrogen, ifenisha yokuqhekeka, ifenisha yokupholisa umkhathi, imishini yokuhlanza imfucumfucu, ukufakwa kwezinto zokuvuselela kabusha kwe-sulfuric acid, amashubhu wokuguqula, amasheya wokugcoba amashubhu, amasende wokuhlanza ama-iron plate, ama-roller oven, amashubhu aluhlaza, njll.
Silandela umbono wokuqamba izinto ezintsha. Sesisungule ithimba lethalente, futhi saqasha ochwepheshe nosaziwayo abaziwayo emikhakheni yezimboni zezolimo kanye neyamamentshisi. Njengamanje, sinabasebenzi abangama-98 ochwepheshe kwezobuchwepheshe, kufaka phakathi onjiniyela abakhulu abangu-2 abajabulela imvume ekhethekile yomkhandlu, 1 uchwepheshe onesihloko esiphezulu kwezobuchwepheshe, esingu-18 onesiteji esiphakathi esiphakathi no-25 onesihloko esithi junior. Sincamela ukubaluleka okukhulu ekubambisaneni kwezeyunivesithi nezimboni. Sigcine ukusebenzisana okukhulu kwezobuchwepheshe nezikhungo zasekhaya namanyuvesi (iNanjing Tech University, University yaseJiangsu, i-East China University of Science and Technology, njll). Kusungulwe nesikhungo sezobuchwepheshe kwebhizinisi, sathola amalungelo obunikazi angaphezu kwama-20, imikhiqizo emi-3 ephezulu yezobuchwepheshe kanye nokuhlonishwa kweHigh Technology Enterprise.
Simise ukuphatha kwethu ngokuphelele futhi sakha izinhlelo zemisindo. Sidlule i-IS09001-2015 (isitifiketi sekhwalithi yekhwalithi), i-IS014001-2015 (isitifiketi sohlelo lwezemvelo) kanye ne-OHSAS18001-2007 (isitifiketi sokulawulwa kwezokuphepha emsebenzini) kanye nesitifiketi sokumiswa kwezokuphepha. Ngaphezu kwalokho, sinikezwe amalayisense wokukhiqiza i-A1 ne-A2 yomkhumbi wokucindezela, ibanga le-boiler yokushisa imfucumfucu kanye ne-grade-B boiler, isitifiketi sokusebenza kwemishini ekhethekile kanye nesitifiketi semfundo yokufudumeza ye-ASME.
Kule minyaka, samukelwa ngumphakathi Sithole inombolo yemiklomelo yesifundazwe neyezwe, efana ne-Quality Management Award Unit esifundazweni saseJiangsu, i-AAA Credit Enterprise, njll. Singabathengisi bemikhiqizo yaseChina kanye neyomhlaba jikelele. amabhizinisi, kufaka phakathi iPetro China, iSinopec, i-CNOOC kanye ne-SEI, i-HQCEC, i-East China Engineering Company ye-CNPC, i-SSEC China Chengda Engineering Company, West China Chemical Industry Design Institute, njll. Ngaphezu kwalokhu, siyilungu lekomidi lesizwe isikhungo semishini yokwakhiwa kwamakhemikhali kanye nelinye lamalungu omkhandlu weSinopec hydrogen ekukhiqizeni umfelandawonye.
Sinamathela kumgomo wekhwalithi yokuqala nekhredithi konke okusemandleni. Sithatha ubuchwepheshe obusha njengokwazisa, sihlose ukunikeza amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo eziphendulayo. Ngobuhlakani nemizamo engafiki yokwazisa yabantu bethu, sizibophezele ekukhuleni siba umphakeli ovelayo oqhubekayo wemishini esetshenzisiwe ngokuphelele embonini yamakhemikhali kaphethiloli.
sesitimela Consulting , Ironworks , Ukunciphisa Block , Chill Water Machine , Rail Transit , Heater Ukubika Inkinga YeWindows Isigaba ,